DOWNLOAD PDF ONYE KERE ỌHỤRỤ VERSION - MMEMME NYOCHA - 2019
PDF Onye kere 3.2.0
PDF Onye kere bụ usoro maka igbanwe faịlụ na PDF, nakwa maka ederede ederede.
Mgbanwe ntughari na windo nke usoro ihe omume. Enwere ike ịhụ akwụkwọ na diski ike site na iji Explorer ma ọ bụ jiri ọkpụkpụ dị mfe ma dobe.
Tupu ịchekwaa faịlụ ahụ, usoro ihe a na-enye aka ịkọwa ụfọdụ njikwa - usoro mmepụta, aha, aha, isiokwu, isiokwu, ma chekwaa ebe. Lee ị nwekwara ike ịhọrọ otu n'ime profaịlụ ntọala.
Nkọwapụta - nhazi nke ihe ụfọdụ na omume ndị mmemme ahụ na-eme n'oge ntughari. Akụrụngwa nwere ọtụtụ nhọrọ ị ga-eji na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ jiri aka dozie ntọala maka ịchekwa, ịtụgharị, ịmepụta metadata na nhazi ihuenyo. N'ebe a, ị nwekwara ike dee data a ga-ezipụ na netwọk ma hazie ntọala nche nke akwụkwọ.
Site na ndabara, usoro ihe a na - eji ngwa kwesịrị ekwesị mepụta onye na - ebi akwụkwọ, ma enyere onye ọrụ ohere ịgbakwunye ngwaọrụ ya na ndepụta a.
Usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere ịmepụta akaụntụ iji zipu faịlụ site na email, FTP, na igwe ojii Dropbox, ma ọ bụ na ihe nkesa ọ bụla.
Iji dezie akwụkwọ dị na PDF Onye Okike nwere ọkwa dị iche iche a na-akpọ PDF Architecture. Usoro ntinye ya na interface ya dị ka ngwaahịa MS Office ma nye gị ohere ịgbanwe ihe ọ bụla na ibe.
Na ya, ị nwekwara ike ịmepụta akwụkwọ PDF ọhụrụ na oghere peeji nke ị nwere ike ịgbakwunye ma dezie ederede na ihe oyiyi, yana ịgbanwe mpaghara dị iche iche.
A na-akwụ ụfọdụ atụmatụ nke editọ a.
Izipu faịlụ na netwọk
Dịka e kwuru n'elu, usoro ihe omume ahụ na-enye gị ohere izipu kere ma ọ bụ gbanwee akwụkwọ site na e-mail, tinyere ihe nkesa ma ọ bụ igwe ojii Dropbox. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịma akụkụ nke ihe nkesa na ịnweta data data.
Akụrụngwa na-enye onye ọrụ ikike iji chekwaa akwụkwọ ha na paswọọdụ, izo ya ezo na ntinye onwe ya.
Ngwa ngwa ngwa nke akwụkwọ;
Ezigbo nchịkọta akụkọ;
Na-eziga akwụkwọ na ihe nkesa na ozi;
Ọrụ nhazi ederede na modul PDFArchitect.
PDF Onye Okike bụ ihe dị mma, usoro nwere ike iji gbanwee faịlụ PDF. Ihe nchịkọta zuru ezu nke onye nchịkọta akwụ ụgwọ, ma ọ dịghị onye na-enye nsogbu iji mepụta akwụkwọ na Okwu, ma weghagharịa ha na PDF site na iji software a.
Download Trial Version PDF Onye Okike
PDF24 Onye Okike Free meme kere Ihe ngosi ihe ngosi nke di elu EZ Photo Kere kere
PDF Onye Okike bụ mmemme maka ịmepụta akwụkwọ PDF, yana inye ikike iji dezie, zipu faịlụ n'elu netwọk ma chebe ha.
System: Windows 7, 8, 8.1, 10, Vista
Onye Mmepụta: PDFForge